बाबा राम रहीम दोषी ठहर, मृत्युदण्डको सजाय हुन सक्ने, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
बाबा राम रहीम दोषी ठहर, मृत्युदण्डको सजाय हुन सक्ने
एजेन्सी । भारतका एकजना बाबा गुरमीत राम रहीम पत्रकार हत्यामा दोषी ठहर भएका छन् । केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई)को विषेश अदालतले उनलाई शुक्रबार दोषी ठहर गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । १७ जनवरीमा रामरहिमसहित ४ जनालाई १६ वर्ष पुरानो हत्याकाण्डमा सजाय सुनाइने छ ।
२ जनवरीमा सीबीआईले १६ वर्ष पुरानो यस मामिलाका आरोपी गुरमीत राम रहीम, निर्मल, कुलदीप र किशन लाललाई कोर्टमा पेश हुन आदेश दिएको थियो । फैसला जज जगदीप सिंहले सुनाए । उनैले साध्वी यौन शोषण मामिलामा पनि राम रहीमलाई सजाय सुनाएका थिए ।
पञ्चकुला कोर्टमा रामरहीम विभिडयो कन्फ्रेन्सका माध्यमबाट पेश भएको जनाइएको छ ।
फैसलापत्रि पत्रकार छत्रपतिका छोरा अंशुलले लामो संघर्षपछि न्याय मिलेको प्रतिक्रिया दिए । उनले राम रहीमलाई मृत्यु दण्डको सजाय हुनुपर्ने बताए । राम रहीममाथि जुन धाराअनुसार दोषी ठहर गरिएको छ त्यसअनुसार आजीवन जेल वा मृत्युदण्ड हुनसक्ने व्यवस्था रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।
साध्वी यौन शोषण मामिलामा जुन पत्र लेखिएको थियो, त्यसैका आधारमा पत्रकार रामचन्द्र छत्रपतिले आफ्नो पत्रिकामा समाचार प्रकाशित गरेका थिए । त्यसपछि छत्रपतिमाथि दबाब दिइयो । दबाब र धम्कीबाट छत्रपति नडराएपछि २४ अक्टूबर २००२ मा उनीमाथि आक्रमण भयो । र २१ नोभेम्बर २००२ मा दिल्लीको अपोलो अस्पतालमा उनको मृत्यु भयो ।
बाइकमा आएका कुलदीपले रामचन्द्रमाथि गोली प्रहार गरेका थिए । कुलदीपसँगै निर्मल पनि थियो । जुन पेस्तोलबाट गोली चलाइएको थियो, त्यसको लाइसेन्स डेरा सच्चाका म्यानेजर किशन लालको नाममा थियो ।
गुरमीत राम रहीममाथि हत्याको षडयन्त्र बनाएको आरोप लगाइएको थियो । हाल राम रहीम दुई जना साध्वीको यौन शोषण गरेको आरोपमा दोषी ठहर भएर २० वर्षका लागि जेलमा छन् ।